Verbatim5in 1 USB-C 3.1 Card Reader ~ ICT.com.mm
HomeVerbatim5in 1 USB-C 3.1 Card Reader
Verbatim5in 1 USB-C 3.1 Card Reader
USB-C™ 3.1 ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ Verbatim အမှတ်တံဆိပ် USB-C 3.1 Card Reader ဖြစ်ပါတယ်။ USB Type C စနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေ၊ Laptop တွေနဲ့ MacBook တွေ အားလုံးကို တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့စမတ်ပစ္စည်းတွေကြားထဲမှာ ဒေတာဖလှယ်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ USB 3.0 Port (၃)ခု၊ SD card Port (၁)ခုနဲ့... [Learn more]
USB-C™ 3.1 ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ Verbatim အမှတ်တံဆိပ် USB-C 3.1 Card Reader ဖြစ်ပါတယ်။ USB Type C စနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေ၊ Laptop တွေနဲ့ MacBook တွေ အားလုံးကို တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့စမတ်ပစ္စည်းတွေကြားထဲမှာ ဒေတာဖလှယ်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ USB 3.0 Port (၃)ခု၊ SD card Port (၁)ခုနဲ့ MicroSD Port (၁)ခု စုစုပေါင်း Extension Port (၅)ခု ပါဝင်တဲ့အတွက် Memory Card တွေ၊ Hard Drive တွေနဲ့card USB Stick တွေထဲက ဒေတာတွေကို မိမိတို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာတွေ၊ စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ အလွယ်တကူချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းကောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။
Compatible with Type C devices for both smartphones & Notebooks, Comes with5ports for connecting memory cards, HDD, USB and other storage media, Stable & fast data transmission speed, Dimension : 44.5 x 100 x 15mm, Net Weight : 47g, Operating System : Win XP/Vista/7/8/10, Mac OS 9.0 or later, Model No.: 65679
Compatible with Type C devices for both smartphones & Notebooks
It is equipped withaUSB-C™ 3.1 interface, which can be compatible with Type C devices, including MacBook & laptops, and Android Type C 3.1 models. It allows you to transfer files between different devices.
It includes3USB 3.0 ports, 1 SD card port and 1 microSD card port to connect various storage media like memory cards, HDD and USB.